An-dalambe sy antserasera, Mivondrona manohitra ny fitondrana miaramila amin’ny endriny vaovao ny olom-pirenen’i Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Avy amin'ny 'Generation-Z' ny hery lehibe mitarika ambadiky ny fihetsiketsehana.
MpanoratraGlobal Voices South East Asia
Voadika ny 19 Marsa 2021 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Ελληνικά, English
Saina avy amin'ny fokom-pirenena isankarazany ao Myanmar nandritra ny diaben'ny fanoherana ny fanonganam-panjakana tao Yangon. Nahazoana alàlana.
Nipoitra voalohany tao amin'ny bilaogin'ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices izay tsy te-ho fantatra ity lahatsoratra ity. Navoaka eto ho tantara mizara andiany telo izany.
Avy amin'ireo tanora – mpikambana ao amin'ilay antsoina hoe Generation Z- izay nanararaotra ny fahaizan'izy ireo mamorona, ny fahaizan'izy ireo teknolojia ary ny fahavononan'izy ireo hanohitra ny fitondrana miaramila ny ankamaroan'ny angovo ao ambadiky ny hetsi-panoherana nitranga tao Myanmar hatramin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 1 Febroary 2021.
Niraisana tanteraka ihany koa ny fihetsiketsehana, nandray ireo olona avy amin'ny karazana asa sy mari-panondroana isan-karazany, ao anatin'izany ny olona avy amin'ny karazam-pinoana sy ny vondrom-piarahamonina LGBTQ. Nanohana ireo mpanao fihetsiketsehana ny sivily tamin'ny fanomezana sakafo, zava-pisotro, sora-baventy ary fitaterana. Ny sasany indray nandray anjara tamin'ny fanadiovana ny arabe nandritra sy taorian'ny fihetsiketsehana mba hitazomana ny endrika tsara an'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny 11 febroary, nipoitra ny Komitin'ny fitokonana faobe ho an'ny Zom-pirenena rehetra [General Strike Committee of All Nationalities (GSCN)], nampivondrona ireo foko teratany 27 ao Myanmar – fampisehoana firaisankina goavana iray manohitra fahavalo iraisana. Nandefa hafatra mafonja ho an'ny demaokrasia federaly ny GSCN ary ny fandravana ny Lalàmpanorenana 2008 narafitry ny fitondrana miaramila teo aloha.
✊To demand the release of all political prisoners #WhatshappeninginMyanmar #MilkTeaAlliance #GSCN pic.twitter.com/SUI10mxitd
Miantso ny vahoaka ny mpikatroka ara-poko mba handray anjara amin'ny fihetsiketsehana rahampitso
✊Mba hampitsahatra ny jadona
✊Mba hamongorana ny lalàm-panorenana 2008
✊Mba hanangana Sendika Federaly Demaokratikan'i Birmania
✊Mba hitaky ny famotsorana ireo gadra politika rehetra
Amin'ny fampiraisana ny olona mihoatra ny fefy ara-poko, vao maika nanosika ny sasany hisaintsaina ny fijoroany manoloana ny Rohingya atao fahirano ny hetsi-panoherana fanonganam-panjakana. Nampijalian'ny miaramila hatramin'ny ela sy tsy ankasitrahan'ny governemantan'i Myanmar ho toy ny olom-pirenena ny Rohingya, vondrona foko Silamo vitsy an'isa monina amin'ny faritra sisintany andrefan'ny Myanmar.
We, #Rohingya completely understand your pain. Together we will win this fight. We all are with you to get rid of military regime from #Myanmar. Our common enemy is #MinAungHlaing. #Feb28Coup #myanmarmilitarycoup #MilkTeaAllianceMyanmar #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/fohhxIEAgd
Izahay, #Rohingya dia mahatakatra tsara ny fijalianareo. Hiara-mandresy amin'ity ady ity isika. Miaraka aminareo izahay rehetra mba handrava ny fitondrana miaramila avy ato #Myanmar. Ny fahavalontsika iraisana dia #MinAungHlaing. #Feb28Coup #myanmarmilitarycoup #MilkTeaAllianceMyanmar #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/fohhxIEAgd
Tanora Rohingya maro no nanatevin-daharana ny ady amin'ny fitondrana jadona.
Tetika famoronana sy fanalam-baraka ampahibemaso an'ireo mpanohana ny tafika
Nampiasa fomba fanentanana amin'ny endriny vaovao maro ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny 18 Febroary, nandehandeha mandroso sy miverina amin'ny faritra fandehanan'ny mpandeha an-tongotra amin'ny arabe ireo tanora mpanao fihetsiketsehana tao Yangon taorian'ny nandraran'ny polisy azy ireo tsy hanakana ny arabe. Natao hanesoana ny tenin'ny mpitondratenin'ny tafika ny tetika izay nilaza roa andro talohan'izay fa notanterahina ara-dalàna ny fanonganam-panjakana. Niampita arabe hatrany hatrany tamin'ny fomba ‘ara-dalàna’, ho setrin'izany ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanakana ny fivezivezin'ny fiara.
Nampiasa ny fomba rehetra azony eritreretina ny olona mba hiadiana amin'ny fitondrana jadona. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny fombafomba fanozonana mifototra amin'ny finoan'ny olona any amin'ny tanàna toa an'i Bagan, Pathein, Yangon sy Kyaukse; ny famoahana hafatra toy ny “Mila demaokrasia izahay” amin'ny taratasy lehibe teny amin'ny araben'ny tanàna manerana an'i Myanmar; ny famoahana ny sarin'ny fihetsiketsehana teny amin'ny rindrin'ny tranobe amin'ny alina; graffiti; ary fotoam-bavaka nataon'ny Bodista, Silamo sy ny Kristiana teny an-dalambe.
Namoaka antso ihany koa ny hetsika fanoherana ny fanonganam-panjakana mba hanao ankivy ireo orinasam-panjakana miaramila sy ny entana vokariny. Iray amin'ireo sehatra nomerika maromaro manangona vaovao momba ireo orinasa misy rohy mankany amin'ny tafika ny rindrambaiko finday antsoina hoe “Way Way Nay” (Mialà Lavitra) . Voalaza fa nidina ny vola azon'ny MyTel mpamatsy fifandraisan-davitra miaramila tapa-bolana taorian'ny fanonganam-panjakana, tahaka izany ko an'ny Myanmar Beer.
Namoaka antontan-taratasy miafina avy amin'ny Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) an'ny miaramila ny fikambanana Mpanao Ampamoaka (Whistleblower) Justice for Myanmar, izay milaza antsipirihany ny vola tsy ara-dalàna nalefa tany amin'ny tafika.
Nifanindran-dalana akaikin'ny fanaovana ankivy ny fanalàna baraka ampahibemaso ireo mpanohana ny filankevitry ny tafika. Hatramin'ny herinandro faharoa tamin'ny volana febroary, mpivarotra maro any amin'ny tanàna samihafa no nandefa famantarana mampiseho ny fandavany hivarotra amin'ny fianakaviana miaramila sy polisy; ny sasany aza tsy mety mivarotra amin'ireo mpiasam-panjakana izay tsy nanatevin-daharana ny hetsika tsy fankatoavana sivily. Mifanohitra amin'izany, nanolotra fihenam-bidy hanampiana ireo mandray anjara amin'ny CDM ny magazay sasany.
Paikady hafa nampiasain'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Yangon sy tanàndehibe hafa ny fametrahana sary sy ny endrik'ireo lehiben'ny fanonganam-panjakana, ny Jeneraly Min Aung Hlaing, eo amin'ny tany na eo amin'ny ampingan'izy ireo mba ho fomba hanakiviana ny miaramila tsy handroso — sokajiana ho mariky ny tsy fanajana amin'ny kolontsaina Myanmar ny manitsaka na mamely eny fa na dia ny sarin'ny mpitarika azy ireo aza.
Saingy tsy teo an-dàlambe fotsiny ny tolona— niasa an-tserasera ireo “mpiady amin'ny kitendry” mba hisarika ny sain'ny iraisampirenena sy hitazonana ny firosoan'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nampiasaina be tamin'ny Facebook sy Twitter ny farangonteny #WhatshappeninginMyanmar.
Mihanaka amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny fanalam-baraka ampahibemaso ary ny fitakiana fanasaziana ara-tsosialy an'ireo mpanohana ny tafika sy ny polisy mahery setra. Namoaka ny anaran'ireo mpiasan'ny tafika izay nanao ratsy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpisera media sosialy manohitra ny fanonganam-panjakana ary koa nampiharihary ny mombamomba ireo olona izay naneso ireo tranga ireo.
Nampitandrina ireo mpijirika ao Myanmar fa mikasa ny hikendry ireo tranokalan'ny tafika rehetra izy ireo, anisan'izany ireo ao amin'ny Banky foibe Myanmar sy ny filankevitry ny miaramila. Tamin'ny 18 Febroary, nanambara tao amin'ny Twitter ny vondrona mpijirika iraisampirenena Anonymous fa hanampy ny olom-pirenenan'i Myanmar izy ireo, ary tamin'ny 23 Febroary dia nanambara cyberwar (ady antserasera) amin'ny tafika Myanmar izy ireo.
Manohana an'i Myanmar ny Anonymous [tsy mitonona anarana].
Nampiala-voly ny mponina ihany koa ny votoaty maneso ny miaramila sy ny polisy tao amin'ny aterineto. Nandefa sary-sy-soratra miorina amin'ny tranga niseho nandritra ny fihetsiketsehana ny pejy Facebook toy ny Generation Z, ary koa nanintona ny saina ho amin'ny fihetsika fanohanana sy ny paikady vaovao ampiasain'ny taranaka tanora mba hisarika ny saina sy hisorohana ny fisamborana.
Sary-sy-soratra (Meme) amin'ny media sosialy niparitaka be miaraka amin'ny lohateny: Tadiavo Min Aung Hlaing. Ny jeneraly zokiny (eo amin'ny ambany ankavia eo amin'ny sary – ankavanana ambanin'i Hitler), matetika ihomehezana noho ny hafohiny.
Sary-sy-soratra natambatambatra fanesoana ny mpanao fihetsiketsehana voakarama hanohana ny fitondrana miaramila. Hatramin'ny nanombohan'ny fanonganam-panjakana, nanakarama olona hanao hetsika mba hanohana azy ny fitondrana miaramila. Misy ny fiheveran'ny besinimaro fa karamaina 5000 kyats (3,50 dolara amerikana) isan'andro izy ireo ary nomena anarana hoe ‘5000 kyats’.
Sary-sy-soratra (Meme) maneso ny polisy misahana ny rotaka mampiseho mofo fisaka paratha, fanondroana ny bemidina tao amin'ny tanànan'i Tarmwe, Yangon tamin'ny 25 febroary, izay nakàn'ireo miaramila an-keriny sy nihinanany paratha tao amin'ny saretin'ny mpivarotra amoron-dalana iray izay nitsoaka. Nalain'ilay mpanao gazety Sit Htet Aung ny sary tany am-boalohany, izay naka ny sary raha nihazakazaka nanatona hamely azy ny polisy.
Sary-sy-soratra (Meme) maneso ny fiafenan'ny miaramila naparitaka toy ny polisy misahana ny rotaka ao Yangon. Hoy ny lohatenin'ny lahatsoratra hoe “Aza katahotra amin'ny karatra sary [solosaina]”